Seychelles Gurukota rezvekushanya rinoshanyira zvivakwa zvidiki zveLa Digue
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles Gurukota rezvekushanya rinoshanyira zvivakwa zvidiki zveLa Digue
Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Kudzokera kumidzi yake, Gurukota rinoona nezvekunze uye Tourism, VaSylvestre Radegonde, ivo vega Diguois, vakakwira chikepe kuenda kuchitsuwa cheLa Digue, vachidana zvivakwa zvidiki mukuedza kwavo kuenderera mberi kuti vazvizive nevakabatana vekushanya pamwe nezvigadzirwa zvavo.
Varidzi paLa Digue vakabvumirana vese kuti chitsuwa ichi chiri kudzoka kuhupenyu sevashanyi vanodzoka zvishoma nezvishoma.
Minister Radegonde vakasimbisa kukosha kwekuchengetedza La Digue nemararamiro ayo.
Secretary Secretary wezvekushanya Mai Sherin Francis vakaratidza kuti mamwe emahofisi madiki aya ane zviyero zvakafanana neakakura, emahotera emhando yepamusoro.
Anoperekedzwa neMunyori Mukuru weVakashanyi Mai Sherin Francis, Gurukota Radegonde vakatanga rwendo rwavo paLa Digue neChina, Nyamavhuvhu 19, 2021, kuLakaz Safran. Izvi zvakateverwa neLa Digue Self Catering Apartments, Chez Marston, Domaine Les Rochers, Le Nautique Luxury Waterfront Hotel, Tanette's Villa, Fleur de Lys, Auberge De Nadege, Ylang Ylang, Hyde-Tide Apartments uye kupera kuLa Digue Holiday Villas.
The Kushanya kwevashumiri yakaenderera zuva rakatevera kutanga paKaz Digwa Self Catering ichiteverwa nePension Fidele, Gregoire Apartments, Pension Hibiscus, Lucy's Guesthouse, Cabane Des Anges, Pension Michel, Le Repaire Boutique Hotel & Restaurant, Chez Marva, La Belle Digue Don uye kupedzisa neBelle Amie.
Varidzi vepaLa Digue vakabvumirana vese kuti chitsuwa ichi chiri kudzoka kuhupenyu sezvo vashanyi vanodzoka zvishoma nezvishoma. Vafambi vazhinji vachiri kuzviwana vachinyengerwa nemazango echitsuwa ichi, kunyanya runyararo rwechitsuwa uye mutsa wevanhu, vachizviwana vachinzwa pamba chaipo.
Vanoverengeka veava varidzi vezvivakwa vaive nezvakawanda zvainetsa nezvekushomeka kwevashandi vakavimbika uye nenjodzi yemararamiro eLa Digue. Vakataurawo kushushikana kwavo pamusoro pehuwandu hwekuwedzera kwezuva vafambi. Nekuda kweizvozvo zvinhu zvinoverengeka zvinosanganisira kuderera kwehuwandu hwevanosvika kuchikepe kuchitsuwa icho chakakanganisa huwandu hwavo hwekugara, vashoma vashanyi vari kugara husiku, izvo zvakaderedza mari yechitsuwa.
Iine runyoro rwechokwadi rwecreole, La Digue yakagadzira zita rekupa vafambi ruzivo rwekupedzisira mutsika, zvisinei, zvemazuva ano zvatyisidzira kuparadza zvimwe zvezvinhu zvakasarudzika pachitsuwa ichi.
Gurukota Radegonde vakasimbisa kukosha kwekuchengetedza La Digue nemararamiro ayo. Tinofanirwa kupa vashanyi vedu chinhu chekugara, ndosaka tichifanira kusiyanisa zvigadzirwa zvedu uye kumutsidzira zviitiko zvetsika. Kunyangwe La Digue iri imwe yenzvimbo shoma dzakasara muSychelles iyo yakwanisa kubatirira pamararamiro e creole, tinofanirwa kuona kupona kwayo. ”
Akaenderera mberi achiti: “Aya madiki madiki anotarisisa, achipa vashanyi vedu chokwadi Seychelles ruzivo, ndosaka vachida tsigiro yedu yepamusoro. "Tinofanira kuongorora mazano matsva anokurudzira vashanyi kushandisa mari uye kubatsira nzvimbo idzi kuvandudza maratidziro avo."
PS Francis akataura kugutsikana kwake nemhando yezvigadzirwa paLa Digue, “Dzimwe dzenzvimbo diki idzi dzine zviyero zvakafanana nemahotera makuru, emhando yepamusoro; yakakura uye yakashongedzwa zvakanaka ichipa vashanyi vedu manzwiro akasarudzika tichichengetedza runako rwecreole. ”
Gurukota Radegonde vakorokotedzawo vaDiguois nekuvandudzwa kwehutsanana hwechiwi. Iye akacherechedzawo kuti kune chiyero chakanaka chezvigadzirwa maererano nekugara nekuvapo kwakasimba kwekutarisirwa uye nesimba kunoiswa mune izvi zvigadzirwa. Nekudaro, akabvuma matambudziko avo uye nemabatirwo avanofanira kuita kubva kumisika yechinyakare yekuEurope nekupinda mumisika, senge Eastern Europe neUAE, idzo dzakaratidza kugona kukuru mukati medenda iri.
Uku kushanya chikamu chebasa raGurukota Radegonde rinoenderera mberi rekuvaka hukama hwakasimba neindasitiri yekushanya yemuno uye kugadzirisa nyaya dzakakurumbira.